Dị ka isi ihe eji ehicha ụlọ - onye na-ehicha ụlọ, ọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ ọ bụla bụ ngwaọrụ dị mkpa. Agụụ Cleaner dị mfe iji, ma ọtụtụ ndị anaghị amasị nhicha na mmezi nke agụụ Cleaner. Ka anyị mụta otu esi ehicha ma debe ihe nhicha na Xiaobian. www.chinApp.Com China ika weebụsaịtị
1. Hichaa sundries na uzuzu nchịkọta ngwa na ịwụ na oge, hichaa ájá okporo na akpa mgbe ọ bụla na-arụ ọrụ, lelee ma enwere perforation ma ọ bụ ikuku leakage, na juputara hichaa ájá okporo na akpa na omo na mmiri ọkụ, na ịfụ kpoo ha. A machibidoro ya iwu iji ntụ ntụ na akpa.
2. Lelee ma ụdọ ike na plọg mebiri emebi. Mgbe ejiri ya, ikuku ikuku na-agbakọta n'ime otu ma kwụgidere ya na nko mkpuchi isi.
3. Mgbe ịmịkọrọ mmiri, lelee ntinye ikuku maka mgbochi ma ọ bụ irighiri ihe, ma ọ bụghị hichaa ya ma lelee ebili mmiri na-ese n'elu mmiri maka mmebi.
4. E kwesiri iji nlezianya edozi igwe ahụ ma ghara ịmetụta ya site na mpụga.
5. Mgbe igwe na-enweghị ọrụ, ọ ga-etinye ya na ventilashị na ebe kpọrọ nkụ.
6. Mgbe ị na-ehicha igwe, biko hichaa ya na akwa mmiri nwere mmiri ma ọ bụ ihe na-anọpụ iche. A machibidoro ya iwu imikpu isi engine ahụ n'ime mmiri maka ihicha. Ejila ihe nhicha ahụ dịka mmanụ ụgbọala na mmiri banana, ma ọ bụ shea ahụ ga-agbaji
7. Edebela igwe na-arụ ọrụ na-aga n'ihu ruo ogologo oge. Biko jikwaa na-aga n'ihu na-arụ ọrụ oge n'ime 2 awa, ma ọ ga-emetụta ọrụ ndụ nke igwe.
8. Mgbe ejiri ihe nhicha ihe mee ogologo oge, mmiri ahụ ga-ebelata n'ihi nkwụsị nke ntupu nke ihuenyo nyocha. Iji gbochie mmiri mmịpụta ahụ, a ga-ehicha ihuenyo nhicha ahụ na akwa ákwà mgbe niile na mmiri, wee kpoo ebe dị jụụ maka iji weghachi mmiri ahụ.
9. Ọ bụrụ na isi injin ahụ dị ọkụ, na-enye isi ísì, ma ọ bụ na ọ nwere ụda na-adịghị mma, a ga-eziga ya maka ndozi na oge, anaghị amanye ya iji ya.
10. Ejila eriri mmiri ugboro ugboro, agbatịla ya ma gbagọọ ya.
11. Ọnọdụ nke onye na-ehichapụ agụụ ekwesịghị itinye ya na mmiri ma ọ bụ ebe na-emebi emebi ruo ókè o kwere mee, a ga-ahọrọkwa ebe a na-ekpochapu ventilashị iji zere mmebi ahụ
Mgbe iwebata Xiaobian, anyị kwesịrị ịma ka esi ehicha ihe nhicha nhicha.